Kedu ihe iji weta si Dubai?
Dị ka dike nke oge ochie na-eme egwuregwu na-emesi anyị obi ike, ihe nile dị na Gris. Ma ee e, ọ dị njọ - ịchọta ihe niile, ịkwesịrị ịzụta njem ọ bụghị Gris, ma United Arab Emirates . Ọ bụ na nkuku ụwa ka akụ niile ị nwere ike iche n'echikọta. Karịsịa karịsịa na nke a bụ Dubai, na-eti ihe niile ndekọ site na ọnụ ọgụgụ nke ngwaahịa na-enye.
Kedu ihe ị ga-esi na Dubai?
N'ezie, ịzụ ahịa na Emirates - ụtọ ahụ abụghị ọnụ ala. Ma àgwà nke ngwongwo na oke nhọrọ ha karịrị ụgwọ maka nnukwu ego. Gịnị ka anyị kwesịrị ilebara anya?
Naanị mgbe ị gara na Dubai, ị nwere ike ikwere na e nwere ihe dịgasị iche iche ngwaahịa sitere na ọlaedo . Ee, ee, ọ dịghị ebe ọzọ n'ụwa ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ọla-edo mara mma maka uto niile n'otu oge. Ekwela ka ọnụahịa ndị ndị na-ere gị na-egwu gị-dịka ọ dị na obodo ọ bụla ọwụwa anyanwụ ọ bụ omenala ịzụ ahịa ebe a.
Maka ndị na-ahọrọ ụda ọla edo a na-egbuke egbuke na oke nrọ nke pearl, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị hụ na nbịakọta nke pel pel dị ogologo bụ ụlọ ọrụ omenala na Arab Emirates. Ya mere, dịka ihe nchekwa si Emirates, ị nwere ike iweta ya kpọmkwem.
Ndị na-ahụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ kwesịrị ịkpata ihe ncheta aromatic si Dubai. Ihe dị iche iche nke mmanụ ala ahụ bụ na n'ihi okpomọkụ ahụ, ọ bụghị mmanya na-aba n'anya na ya. Ya mere, aromas na-adịgide na akpụkpọ ahụ ruo ogologo oge, na-emeghe oge. Ọ bụrụ na ị maara kpọmkwem ihe ịchọrọ, ndị isi ụlọ na-esi ísì ụtọ ga-enwe ike ịjikọta ihe ịmepụtara aha maka gị.
Egbula oge iche echiche ihe ị ga-esi na Dubai maka nwanyị ị hụrụ n'anya - nye ya ego na-arụ ọrụ ego. Na mgbakwunye na ya, ịzụta uwe ndị isi nke ndị Arab na- edozi aka maka ụlọ - ekele ya agaghị ama ókèala.
Onye a hụrụ n'anya nwere ike ịṅụrị ọṅụ na ndị ikom si Dubai na-eji "egwuri egwu" - ndị na- ese sịga, ndị na-ere ọkụ, ndị na-emepụta ihe ọkpụkpụ ma ọ bụ ndị na-egbu egbu .
Ụmụaka ga-enwe obi ụtọ na sweets ndị Arab Emirates - halva, nougat, lukum na ọtụtụ narị ụdị nke ụbọchị.
Goa: Southern or northern?
Anya nke Territory Krasnodar
Kedu ka ị ga-ahụ na Kazan?
Katidral nke Notre-Dame de Paris
Ebe nkiri nke Rethymnon
Church nke Nativity na Bethlehem
Na-ezu ike na Lake Onega
Turin - ebe nkiri
Ezigbo mmasị banyere Cyprus
Ụdị brik masonry
Kedu ihe e nyere maka agbamakwụkwọ pink?
Ime ụlọ maka nwa agbọghọ
Kedu ka esi mụta ịgha ụgha?
A rụrụ American Music Awards na Los Angeles
Meatballs na osikapa
Cork osisi na mgbidi
Mariah Carey nwere nnọọ obi ụtọ na enyi nwoke ọhụrụ ya
Akwukwo Umu Chicken
Ihe omume site n'aka aka
Ugu porridge na osikapa
Kedu ka ị ga-esi tụfuo mgbe ị gachara ebe a?
Okpueze Ceramic Kamiri
Achọrọ m nwatakịrị - ebee ka m ga-amalite?